Janoary 2019 | RayHaber
[03 / 12 / 2019] Tonga tao Samsun ny Komitin'ny Fanomezam-bokotra Samsun Sivas	55 Samsun
[03 / 12 / 2019] 6 Company namboarina ho an'ny Teknolojia Tender an'ny İzmir Karabağlar Metro	35 Izmir
[03 / 12 / 2019] Çekmeköy Sultanbeyli Metro Lalana amin'ny trano fonenana ny trano	34 Istanbul
[03 / 12 / 2019] Samsun Sivas Railway Line Fandrosoana vaovao!	55 Samsun
[03 / 12 / 2019] Kayseri Derevenk Viaduct Vita sy nosokafana fanompoana	38 Kayseri
Apaydın Mandinika ny fiarandalamby Burdur
31 / 01 / 2019 Levent Elmastaş
Ny antokon'ny biraon'ny Burdur Party Burdur Kandidat Deniz Kurt ao anatin'ny tetikasa izay manasaraka roa tontan'ny Burdur TCDD General Manager İsa Apaydın sy ny ekipany ao Burdur [More ...]
Istanbul-Adapazari fiarandalamby mankany amin'ny 5 Fa mbola iharan'ny lozam-pifamoivoizana foana!
Ny sidina ambanivohitra, izay naato noho ny fananganana YHT, dia tsy mbola nanomboka ara-bakiteny. Ny isan'ny sidina mifamadika amin'ny 5, ny andro teo aloha, maro ny mijanona eo amin'ny tsipika Istanbul-Adapazarý izay mbola mihidy hatrany amin'ny lalam-piaramanidina avo lenta inåÿaatä ± ± [More ...]
Nandresy ny 2014 tao anaty fiarandalamby "Tsy mahomby" ny EU
Vondrona eoropeanina alohan'ny fifidianana filoham-pirenena 25 Jolay 2014'de Istanbul-Ankara fiaran-dalamby haingam-pandeha ambony dia "risika fiarovana" noho ny fisian'ny fipoahana te hisokatra. Fitaterana mifangaro ho an'ny zotra Ankara-Konya amin'ny lamasinina haingam-pandeha [More ...]
Hisy rafitra fitetezam-pitaterana vaovao izay hampiharina amin'ny Isparta
Ny kaominin'i Isparta izay natombok'i Cunur Yenisehir tato anatin'ny taona vitsivitsy dia mitohy hatrany amin'ny lalan'ny bisikileta. Ny ben'ny tanàna Günaydın dia nilaza fa ny lalambe rehetra ao Çünür Yenişehir dia misy lalantsara bisikileta ary nilaza hoe “Fanamboarana lalan-bisikileta amina tanàna rehetra [More ...]
Nahoana no voahozona ny toeram-piarovana Marmaray Ayrılık?
Nakatona ny tobim-pahalalana misaraka 21 nanomboka tamin'ny volana Janoary tao Marmaray noho ny fampidirana, famantarana ary fitiliana. 75 km Marmaray asa fampidirana dia antenaina ho tapitra ny volana Desambra. Na izany aza, ny lamasinina ao Ankara [More ...]
Ny Railway Samsun-Batum dia tsy maintsy entina amin'ny fiainana
TMMOB Chambre Môtôlikan'ny milina mekanika misolo tena ny solontena Metin Bıçakçı Samsun Sarp Railway, izay tena ilaina tokoa ho an'ny faritry ny Ranomasina Mainty, tsy maintsy ampiharina, hoy izy. TMMOB anarana fohy [More ...]
Nahomby ny tetikasa IspartaRay
Ny fandaharam-pianarana dia natao ary ny Tale Jeneralin'ny TCDD dia nankasitraka ny tsipika ambany. TCDD General Manager İsa Apaydın ary ny ekipany nankany Isparta. Tale jeneraly Apaydın, 1.etap ao amin'ny Station Isparta-SDU, SDU-KYK, 2.etap ao amin'ny Station-OSB-Airport-Land Aviation [More ...]
Toeram-pivarotan-tranon-jiro fanampiny Fampandrosoana ny asa fanorenana
Fanamboarana arabe Gare fanampiny amin'ny gara Dormitory Vokatry ny hatsaran'ny Repoblika Turkey Turkey Railway 5. 2018 / 707224 GCC fetra fetra 2.857.668,55 TL ary eo ho eo ny vidiny 3.968.219,06 TL ny Dirtement régureur régional (TCDD) [More ...]
Minisitra Turhan, tetikasa BAKAD nitsidika ny tranokalany
Mehmet Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, dia nilaza fa i Kazakhstan dia mino fa ny orinasa mpanamboatra Tiorka Makyol sy Alsim-Alarko, izay manatanteraka ny tetik'asa Famoronana Road Almaty Ring Road (BAKAD) dia hamita ilay asa haingana araka izay azo atao. [More ...]
Ireo ankizy manana ny fanavakavahana dia mankafy ski
Diyarbakır Metropolitan Munisipaly dia nikasa hetsika tao amin'ny Karacadağ Ski Center ho an'ireo ankizy manana autism sy fialantsasatra amin'ny semester, izay mandray soa amin'ny programa fanabeazana ara-panatanjahantena ao anaty trano Bilgi. Diyarbakır Metropolitan munisipalin'ny Tanora sy fanatanjahantena [More ...]
Ny Filoha Turel dia manana 25 Kilometer Metro Line
Ny ben'ny tanàna Antalya Metropolitan Menderes Türel dia nilaza fa manomana tetikasa 359 izy ireo amin'ny vanim-potoana ho avy ary hanome asa ho an'ny olona manodidina ny 70 an'arivony ireo tetikasa ireo. 100. 40 acre National Garden faritra [More ...]
Lalana sinanoğlu, Fampiantranoana mahazatra sy maoderina
Antalya Metropolitan Munisipaly Muratpaşa Sinanoğlu Street ao amin'ny distrika amin'ny fanavaozana ny asphalt, dia mahazo aina. Ny monisipaly Antalya Metropolitan dia namboarina noho ny asan'ny fotodrafitrasa toy ny entona voajanahary ao afovoan-tanàna mifanaraka amin'ny serivisy an-tanàn-dehibe maoderina. [More ...]
Fampandrenesana ny Tender: Fanomanana fampiharana fampiharana amin'ny Bursa YHT fiaran-dalamby sy tobim-piainana
Lozan'ny lozam-piarakodia fa tsy valin'ny fihenan'ny ambaratonga
Hanlı Çetinkaya Fitaovana fametrahana elektronika Fametrahana Tender
Hanao ny fividianana mpiasam-panjakana maharitra ny DHMI!
Ny fitaterana TCDD dia hanao fandraisana mpiasa maharitra!
TULOMSAS 1 Mpiasa mandresy lahatra dia ho voaray
Fahalianana lalina amin'i Cybertruck miaraka amin'i Elon Musk
Balıkesir Firenena misy lalantsara azo antoka
Ny antoka ho an'ny Osmangazi Bridge Pass dia mandoro ny kitapo
Ny valim-pifandraisana natolotry ny IRF an'ny Yavuz Sultan Selim Bridge
Loka iraisam-pirenena ho an'ny Tunnel Eurasia sy ny tetezana Yavuz Sultan Selim
3 New Hotel Tokony hatsangana ao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul
AtlasJet Nijanona sidina ara-potoana
Androany amin'ny tantara: 4 Dec 1929 Kabinetra matory
Tonga tao Samsun ny Komitin'ny Fanomezam-bokotra Samsun Sivas
Çekmeköy Sultanbeyli Metro Lalana amin'ny trano fonenana ny trano
3. Ny tarika iraisam-pirenena iraisam-pirenena, ny tontolo iainana ary ny fahasalamana 2-4 dia hatao amin'ny aprily 2020 ao Ankara
Samsun Sivas Railway Line Fandrosoana vaovao!
Kayseri Derevenk Viaduct Vita sy nosokafana fanompoana
61 An'arivony ny mpitsidika 39 avy amin'ny fampirantiana BUMATECH
Mivondrona miaraka amin'ny tarika Nino Robotics Renault
17 Ford kamiao F-Max kamiao nampiana ho an'ny GBU Logistics Fleet
Tapitra ny lalao fiadiana ny ho any ivelany
100. Manomboka ny hazakazaka eny an-dalambe
New BMW 3 Series ao amin'ny Borusan Otomotiv Premium miaraka amin'ny Long Term Rental Advantage